Banijya News | » को हुन् समिक्षा संग्रौला ज्ञवाली ? भन्छिन् “भविष्यको उज्यालो नक्षत्रलाई मिर्गौला दिदैछु” । को हुन् समिक्षा संग्रौला ज्ञवाली ? भन्छिन् “भविष्यको उज्यालो नक्षत्रलाई मिर्गौला दिदैछु” । – Banijya News
को हुन् समिक्षा संग्रौला ज्ञवाली ? भन्छिन् “भविष्यको उज्यालो नक्षत्रलाई मिर्गौला दिदैछु” ।
२० फागुन, २०७६ ।
लामो समय देखि मिर्गौलासँग सम्बन्धीत समस्याबाट पिडित प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि दोस्रो पटक बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि ओली सोमबार नै अस्पताल भर्ना भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिर्गाैला दिन उनकी भाञ्जी पर्ने समीक्षा संग्रौला ज्ञवाली अस्पताल पुगीसकेकी छिन् ।
आइतबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मिर्गौला दान दिने महिलाबारे जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका सदस्यहरूलाई मृगौला दाताका रूपमा चिनाइएकी ३२ वर्षीया समीक्षा झापा चारालीकी हुन् । समीक्षा ओलीलाई पहिलोपटक मिर्गौला दिने अन्जान घिमिरेकी भान्जी भएको खुल्न आएको छ । सोही कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पनि ‘भान्जी’ नाता परेकी हुन् ।
समीक्षा र उनका पति प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ आउजाउ गरिरहने पाइएको छ भने उनीहरुले प्रधानमन्त्रीबाट दशैंमा टीका समेत लगाउने गरेका छन् ।
यसैबिच समिक्षाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको भोलीको अर्थात भविष्यको उज्यालो नक्षत्र भएकोले आफुले भोलीको दिनको रक्षा गर्न मिर्गौला दिन लागेको बताएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री ओली लामै समय बस्नुपर्ने भएकाले अहिले शिक्षण अस्पतालमा सुरक्षा चेकजाँच कडा पारिएको छ ।
ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न भारतबाट चिकित्सक झिकाइएको छ ।
१३ वर्षअघि नयाँ दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा ओलीलाई भाइबुहारी अन्जान घिमिरेले मिर्गौला दिनुभएको थियो । पहिलेको मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि दोस्रो पटक फेरि प्रत्यारोपण गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको १३ वर्षअघि दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । ६ वर्षअघि उनको हातमा पनि संक्रमण भएको थियो । दिल्ली र थाइल्यान्डमा लामो उपचार गरेपछि निको भएका उनी नियमित फलोअपमा थाइल्यान्ड जाने गरेका थिए ।
पछिल्लो समय भने प्रत्यारोपित मिर्गौलाले पनि काम गर्न छोडेपछि उनको नियमित डायलासिस गर्न थालिएको थियो।